Lynda ANDRIATSITONTA slam poezia	0 Commentaire juin 2, 2018
Manjaka loatra ny herisetra mahazo ny ankizy amin’ny lafiny rehetra. Ahafahana miresaka ny zava-mitranga mahazo azy ireo amin’ny andavanandro, misy ny fifaninana nasionaly momba izany amin’ny alalan’ny “Slam poezia”. Lohahevitra amin’izany ny momba ny herisetra mianjady ny ankizy sy ireo vahaolana na paik’ady aroson’ny mpifaninana iatrehana ireo herisetra mianjady amin’izy ireo. Afaka mandray anjara avokoa ireo ankizy manerana an’i Madagasikara 12 taona ka hatramin’ny 18 taona. Tsy anavahana na iza na iza izany na mpianatra na ireo tsy mianatra kanefa kosa tsy maintsy mahazo fahazoan-dalana amin’ireo ray amandreniny na mpiantoka izany. Tsy maintsy mandefa horonan-tsary 30 segondra ka hatramin’ny 1 minitra ny mpifaninana ka amin’ny endriny “Slam Poezia” izany ary mifandraika amin’ny lohahevitra. Ny fotoana farany andefasana izany horonan-tsary izany, ny 7 jona 2018 ho avy izao. Hisy kosa ny fifidianana ireo horonan-tsary 10 mendrika indrindra ny 11 jona 2018 ka hatramin’ny 18 jona 2018 ao amin’ny facebook “ Fifaninana nasionaly Slam Poezia momba ny herisetra mahazo ny ankizy”. Hisy ny famaranana lehibe atao eto Antananarivo ny 30 Jona 2018 izay atao eo amin’ny zaridainan’Andohalo.
Manentana noho izany ny mpiakarakara mba handraisan’ireo ankizy sy ny tanora anjara amin’ny ho fiarovana amin’ny herisetra mahazo ny ankizy. Misy loka maro ho zaraina.
Marihana fa ny UNICEF sy ny ministeran’ny Mponina sy Fiahiana ara-tsosialy ary ny Fampiroborobona ny vehivavy ( MPPSPF ) no miaraka amin’izao hetsika izao.
‹ « LA PLUS BELLE VOIX DE FARADY » : Hihatsara ny fifaninanana andiany faha-telo	› DISTRIKAN’I BEROROHA: Misy amin’ireo kaominina mbola tsy misy “réseau”